काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब दुई वटा रूख अनिवार्य रोप्नुपर्ने ! – Interview Nepal
काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? अब दुई वटा रूख अनिवार्य रोप्नुपर्ने !
काठमाडौं कंक्रिटको जंगल काठमाडौंमा माहानगरपालिकाले बल्ल घर बनाउँदा रुख रोप्नु पर्ने विषयलाई तदारुकता देखाएको छ । तीन दिन अघि काठमाडौ प्रदुषणले आपकालको तह पार गरेपछि माहानगरपालिका तातेको हो । घरैघरको जंगल काठमाडौं हरियाली कमै देखिन्छ ।
रुख विरुवा रोप्ने कामपाको योजना यत्तिकै थन्किएको छ । स्थानिय रुखहरु करिब करिब लोप भइसकेको स्थिति छ । सडकका छेउछाउ सबै आयातित विरुवाहरुले ढाके । त्यो पनि संरक्षण नपाउँदा लाखौरुपैया खर्च खेर गएको छ ।
महानगरलाई हरियाली बनाउन घर निर्माण गर्दा कम्तिमा दुईवटा विरुवा लगाउनै पर्ने नियम अघि सारेको काठामाडौं माहानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनका अनुसार वातावरण प्रदुषण कम गर्न सघाउ पुग्ने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बोट विरुवा प्रवर्द्धनको लागि नीति नै नबनाएको हैन । तर, नीति कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका जिम्मेवारी भने पुरा गर्न अघि सर्दैन ।
Posted in जिवनसैली, टिप्स, ब्यानर समाचार, समाज